Barnaamijka Raadiyaha wuxuu ku dhiirrigeliyaa dagaalyahannada Boko Haram inay goostaan ​​- Equal Access International
Barnaamijka Raadiyaha wuxuu dhiirigeliyaa dagaalyahan Boko Haram inay goostaan
Dagaalyahan hore oo Boko Haram ah ayaa amaahiyay barnaamij raadiyo 'Voices for Peace' oo uu ku dhiirigeliyay inuu goosto oo noqdo hoggaamiye bulsheed.
Markii Mamadou, * nin dhalinyaro ah oo ka yimid tuulo ku teedsan harada Lake Chad, uu go’aansaday inuu ku biiro Boko Haram si dagaalyahan ah, waxay ahayd inuu codkiisa maqlo.
Mamadou wuxuu xubin ka yahay kooxda qowmiyada tirada yar ee Buduma ee Chad, waa koox taariikhi ah oo la takooro. Iyaga oo loo cuskaday dhibaateyn joogto ah oo ka timaada dowladda iyo ciidamada amniga, kalasooca, fikirka hoose, iyo eedeymaha isku-dhafan ee Boko Haram, Budumas badan ayaa ku nool saboolnimo iyada oo aan si yar looga bixi karin. Si uu u masruufiyo qoyskiisa, Mamadou wuxuu isku dayay inuu isticmaalo ilaha harada Lake Chad, isagoo noqday kalluumeysato da 'yar.
Laakiin sida a Buduma kalluumeyste, Mamadou iyo beeshiisa waxaa badanaa loola dhaqmaa si ka duwan dowlada Chadian.
Bal qiyaas, waxay ku soo rogaan canshuur badan biyaha sahlan ee Eebbe ina siiyay, si aan wax u cunno oo aan uga shaqeyno inaan u taageerno qoysaskeena. Haddii aad shabagyada ama wax kale oo kalluumeysi ah ku dhex gudubto harada, waxay kugu khasbi doonaan inaad bixiso canshuur ka badan inta aad kasban lahayd haddii aad noloshaada oo dhan shaqeyso. Wax aad kasban doontid majirto. Waxaad ku iibin kartaa dhamaan alaabtaada gudaha suuqa; weli ma awoodid inaad bixiso.
Marka, ficil quus ah, Mamadou wuxuu ku biiray Boko Haram, wuxuu go'aansaday inuu la qaato dad kale oo ka tirsan beeshiisa, si uu u caawiyo iyaga. Sidaas ayuu ku qanciyey.
Waxaan iri: waa fursad lagu maqlo. Haddii aan aadno inaan ku biirno dhinaca kale, gobolku wuxuu ku qasban yahay inuu weydiiyo sababta aan u aadnay iyaguna waa inay na dhageystaan, haddii ay doonayaan ama aysan rabin
DHISMAHA FARSAMADA CUSUB EE LA MAQLAYO: 'CODKA NABADDA'
10 sano kadib, fallaagada Boko Haram ayaa tobanaan kun oo rag iyo dumar dhalinyaro ah sida Mamadou ka soo wada gudbeen harada Lake Basin ee doonaysa xasillooni dhaqaale, hay'ad, lahaansho, macno, cod, aargudasho. Jidkooda Boko Haram waa kala duwan yihiin: qaar waa lagu qasbay ama la afduubay, qaar waxaa loo horseedaa inay aamminsan yihiin inay dhalasho u leeyihiin inay difaacaan dhulkooda iyo diintooda, kuwa kale waxay ku biiraan isku dhafka dabeecadaha shaqsiyadeed iyo arrimo dibadeed oo ka sarreeya qeexitaannada ciriiriga ah ee wadayaasha iyo riixida / jiid qodobada aan badanaaba u isticmaalno sidii looga hortegi lahaa khubarada xagjirka ah ee CVE (CVE).
Sanadihii la soo dhaafay, Equal Access International (EAI) ayaa fulisay cilmi Gobolka harada Lake si loo fahmo sida deegaannada dibedda ay u qaabeeyaan cilmi nafsiga shakhsiyadeed iyo dabeecadda iyo sida ay u socdaan howlaha xagjirnimada iyo xoojinta ayaa u ekaan kara si ka duwan haddii dariiqooyin kale ay u heli lahaayeen kuwa ugu khatarta badan. Dadka la wareystay waxaa ka mid ah daraasiin hada ah iyo xubno horey uga tirsanaa kooxaha hubeysan ee xiriirka la leh kooxda Boko Haram ee Nigeria iyo Chad.
Iyada oo loo marinayo warbaahinta maxalliga ah iyo kaqeybgalka bulshada, EAI waxay raadineysay inay sii waddo sheekooyinka cusub ee loogu talagalay nabadda loo dhan yahay iyo is-beddelka bulshada iyo furitaanka dariiqyo loogu talagalay codadka la yareeyay. Qisooyinkan cusubi waxay raadinayaan inay kadhignaadaan oo ay badalaan geedi socodyada burburka leh iyo dabeecadaha laxiriira xagjirnimada ee natiijooyinka togan, iyagoo ku doodaya, in si wax ku ool ah, barnaamijyada P / CVE ay ubaahantahay inay aqoonsato, kobciso, isla markaana kadhigto hantida kadhex jirta dhamaan reeban iyo khatarta. kooxaha (oo ay ku jiraan dhalinyarada xagjirnimada ah).
Daraasaddeena waxay ogaatay in, hantidaas ay ka mid yihiin waxyaabo ay ka mid yihiin hay'ad, ballan-qaad, hoggaan, iyo is-wax-u-qabsi Barnaamijyadeena la-qabsiga ee guud ahaan gobolka Lake Chad iyo guud ahaan gobolka Sahel waxay raadinayaan fursado ay dib ugu milicsadaan raadka, hantida, dabeecadaha, iyo dabeecadaha kuwa ku wajahan xuduudaha bulshada ka imanaya nuglaanta, karti-darrada, iyo xag-jirnimada ku wajahan awood-siinta bulshada ee aan rabshadda ahayn.
Waqtiga wareysigiisa, Mamadou wuxuu ka goostay Boko Haram laakiin ka hor, iyo muddo lix sano ah, isagoo dagaalyahan ah, wuxuu umuuqday inuu doonayo inuu kusii wado darajada darajada: shaqadiisii ​​ugu dambeysay, wuxuu ahaa hogaamiyaha koox hoosaadka Boko Haram oo ka kooban xubno ka tirsan bulshada Buduma, oo ka hawlgala dhowr meelood oo ku yaal hareeraha iyo hareeraha. Laakiin arrimahu si aad ah ayey isu beddeleen ayuu yidhi markii uu maqlay barnaamijka raadiyaha nabadeed ee EAI
Idaacadaha aad ka sameysay raadiyaha ayaa noo horseeday inaan go'aankaan maanta qaadno. Waxaad noo sharaxday in waxa aan sameyneyno ay ka hor imaaneyso diinta isla markaana uu dalkeena burburin lahaa halkii aan ka caawin laheyn; in [rabshaduhu ay ku andacoodeen Boko Haram] aysan ahayn dariiqa Jannada. Waxaan ogaanay inaan qalad ku jirno isla markaana xilligaas aan ka wada hadalnay [ka tegida] raggayga dhexdooda. Waan u yeeray oo waxaan u sheegay in aysan ahayn dariiqii saxda ahaa ee aan ku wanaagsanahay inaan ku laabano waddankeena intii aan noqon lahayn cadowga waddankeenna.
Tan iyo markii uu soo goostay 2018, Mamadou wuxuu ku qanciyay dhowr kale inay raacaan tillaabadiisa oo ay hadda gacanta ku hayaan mas'uuliyiinta waddanka Chadian.
* Magaca ayaa la bedelay si loo ilaaliyo aqoonsiga.
Codadka Nabadda (V4P) waa mashruuc ay maalgaliso USAID oo ay fuliso shirkadda loo yaqaan "Equal Access International (EAI) iyada oo ujeeddadu tahay yareynta u nuglaanta xagjirnimada rabshadaha ah ee ka socda shanta waddan ee gobolka Sahel ee Galbeedka Afrika (Burkina Faso, Cameroon, Chad, Mali, iyo Niger). V4P waxay leedahay joogitaan xoog leh gobolka Lake Lake iyo waxay si joogto ah uga baahdaa gobolka iyada oo tobanaan idaacadood oo la isku halleyn karo ah. Kooxda V4P waxay lashaqeeyaan la-hawlgalayaasheeda si ay u dhisaan adkeysiga iyaga oo wax ka qabanaya sababaha asalka u ah xagjirnimada rabshadaha ah iyo kor u qaadida wadajirka bulshada iyada oo loo marayo barnaamij-ku saleysan arrimaha, wadahadalka maxalliga ah, iyo tababbarka u doodaha dhalinyarada iyo saameeyayaasha. Waxsoosaarka idaacadahan wuxuu abuuraa sheeko kale oo loogu talagalay kuwa ururada xagjirka ah ee rabshadaha wata sida Boko Haram, kuwaas oo ka faa'ideysta kala qeybsanaanta bulshada iyo cabashooyinka bulshada si ay u shaqaaleeyaan shaqsiyaadka sida Mamadou.
In laga hawlgeliyo dhalinyarada khatarta ku jirta ee ka imanaya bulshooyinka la fogeeyey ee dhismaha-dhisidda.